Dib -u -furid buuxda ee xuduudaha Mareykanka si booqdayaasha si buuxda loo tallaalo muddo dheer
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Dib -u -furid buuxda ee xuduudaha Mareykanka si booqdayaasha si buuxda loo tallaalo muddo dheer
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Mexico • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dib -u -furista buuxda ee safarada caalamiga ah ee Mareykanka si shaqsiyaadka si buuxda loo tallaaley waa mid waqtigeedii dhaaftay waxayna siin doontaa jaahwareer dhaqaalaha Mareykanka, safarada meheradaha waaweyn iyo kuwa yar -yar, iyo meelaha loo maro Mareykanka oo dhan.
Soo -booqdayaasha si buuxda loo tallaalay ayaa loo oggolaan doonaa inay ku soo galaan Mareykanka iyagoo ka tallaabaya soohdinta dhulka laga bilaabo horraanta Noofembar.
Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ayaan weli go'aamin tallaallada uu Mareykanku aqoonsan doono.
Taariikhda saxda ah marka xayiraadaha safarka la qaadi doono ayaa lagu dhawaaqi doonaa “goor dhow”.
Saraakiisha sare ee maamulka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo horaanta bisha soo socota, Waaxda Amniga Gudaha ee Mareykanka waxay ka dhaafi doontaa booqdayaasha si buuxda looga tallaalo coronavirus xayiraadaha safarka ee aan daruuriga ahayn ee hadda ka jira labada xuduud ee dhulka Mareykanka.
Xeerarkan oo uu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqi doono Xoghayaha Amniga Gudaha Alejandro Mayorkas, ayaa ka koobnaan doona xuduudaha dhulka iyo marin -biyoodka. Waxay la mid yihiin laakiin isku mid ma aha shuruudihii la qorsheeyey ee lagu dhawaaqay bishii hore dadka safarka ah ee caalamiga ah, ayay saraakiishu sheegeen.
Taariikhda saxda ah ee horraanta Noofembar marka xayiraadaha la qaadi doono ayaa lagu dhawaaqi doonaa “goor dhow,” ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka.
Kastamka Mareykanka iyo Ilaalinta Xuduudaha waxay aqbali doonaan warqad ama caddeyn digital ah oo tallaalka ah, ayay yiraahdeen mas'uuliyiinta Mareykanka. The Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) weli ma aysan cayimin tallaallada uu Mareykanku aqoonsan doono, ayay saraakiishu intaas ku dareen.
Ururka Socdaalka Mareykanka ayaa soo saaray bayaankan soo socda ee ku dhawaaqista in xayiraadaha saaran xuduudaha dhulka Mareykanka ee Canada iyo Mexico la qaadi doono shaqsiyaadka la tallaalay:
“Socdaalka Mareykanka wuxuu muddo dheer ku boorinayay in dib loo furo xuduudaha dhulka Mareykanka, waxaanan bogaadineynaa qorshaha maamulka Biden si loo fududeeyo xayiraadaha gelitaanka booqdayaasha la tallaalay. Tallaabadani waxay keenaysaa soo dhaweyn xagga safarka ah oo ka timaadda labadayada suuq ee ugu sarreeya ee safarka gudaha ah.
“Hoos u dhaca booqashooyinka caalamiga ah tan iyo bilowgii masiibada waxay dhalisay in ka badan $ 250 bilyan dakhligii dhoofinta ee lumay iyo in ka badan hal milyan oo shaqooyin Mareykan ah. Xuduudaha dhuleed ee Kanadiya iyo Meksiko oo xiran ayaa kaliya ku kacaya dhaqaalaha Mareykanka ku dhawaad ​​$ 700 milyan bishii.
“Dib -u -furista buuxda ee socdaalka caalamiga ah ee Mareykanka ee shaqsiyaadka si buuxda loo tallaaley waa mid waqtigeedii dhaaftay waxayna siin doontaa jahawareer dhaqaalaha Mareykanka, safarada meheradaha waaweyn iyo kuwa yar -yar, iyo meelaha loo maro Mareykanka oo dhan.”